नेकपा फुट्नबाट जोगाउने दुई उपाय – Kathmandutoday.com
नेकपा फुट्नबाट जोगाउने दुई उपाय
काठमाण्डु टुडे २०७७ मंसिर ६ गते ८:०७ मा प्रकाशित
काठमाण्डु, ६ मंसिर– एकताको अटुट निरन्तरताका पक्षमा रहेका तिनै नेताहरूसँगको अन्तरक्रियाका आधारमा यहाँ उपायहरू सुझाइएको छ। अहिले भित्र अध्यक्ष ओलीको जवाफ तयार भइरहेको छ। बाहिर मेलमिलापका दौडधूप उत्तिकै चलिरहेका छन्। यस सन्दर्भमा ती मुख्य दुई उपाय प्रभावकारी हुने अपेक्षा राखिएको छ–
एमाले र एमाओवादी एकीकरणका क्रममा एकताको महाधिवेशन पहिलासम्मलाई दुई अध्यक्षको सहमतिमा पार्टी सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको थियो। यस आधारमा हेर्दा अन्य कमिटीका गन्थन–मन्थन, बहुमतरअल्पमतका कुरा बरालिने विषय मात्र हुन् । पार्टीभित्रै पार्टी छन्, तिनका पनि गुट–उपगुट छन् ।
दुई अध्यक्ष मिलेर पार्टी चलाउन नसक्ने हो भने दोस्रो उपाय अपनाउन सकिन्छ– सबै भंग गरेर महाधिवेशन आयोजक समिति बनाउने । त्यसमा एकता महाधिवेशनमा अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्न नचाहने (वर्तमान दुई अध्यक्षबाहेक) शीर्ष नेतालाई संयोजक बनाउने । उदाहरणका लागि झलनाथ खनाल हुन सक्छन् । उनी पुनः अध्यक्ष बन्ने चाहनामा देखिँदैनन् । उनको खास गुट पनि छैन । यो उदाहरण मात्र हो, अरू जो कोही हुन सक्छन् ।
झन्डै दुई तिहाइ बहुमतप्राप्त नेकपा झगडाकै कारण फुट्न मात्र लागेको छैन, जनमतसमेत गुमाउँदै गएको छ । यो परिस्थितिामा अघि बढ्ने दुई बाटा छन्– १. ध्वंसात्मक अर्थात् एक पक्षले अर्कालाई गालीगलौज गर्ने । यसरी नै चलिरहने, नचलेको दिन पार्टी फुटाउने । २. रचनात्मक अर्थात् खिया लागेका नट–बल्टु सफा गर्ने, एकता झन् कसिलो बनाउने । सत्तारूढ दलले सोच्ने विषय यो छ कि– कम्युनिस्ट फुटोस् र घ्वाप्प खान पाइन्छ भन्दै धुप हालेर बस्ने धेरै छन्। तिनैलाई उनीहरूले मलजल पु-याइरहेका छन् । दलभित्रका छिद्र पुर्दै जानुपर्नेमा, थप्दै लगेका छन् ।
एकताका यतिका दिनसम्म आइपुग्दा गल्ती दुवै नेताबाट भए होलान् । अहम् दुवैमै होलान् । तर, दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीको एकीकरण गल्ती थिएन । गल्ती त फेरि फुटाउँदा हुनेछ। दुवैले अलिकति अहम् त्याग्दा वा फराकिलो छाती बनाउँदा नेकपा जीवित रहन सक्छ । त्यसका लागि उत्तम समाधान माथिका ‘दुई उपाय’ हुन सक्छन् कि ? अन्नपूर्ण पोस्टबाट